အသကျငယျ တဲ့ ကောငျလေးကို ခဈြမိတဲ့ “မမတှေ” ကွုံတှရေ့မယျ့အရာ (၈) ခု – Let Pan Daily
အခဈြဆိုတာ ဘယျလိုစံနှုနျးတှထေားပီး ဘယျလိုကမြှပဲ ခဈြမယျဆိုပွီး သတျမှတျသတျမှတျ အခဈြက သူသှားခငျြတဲ့နရောသှားတတျတာပါ။ အင်ျဂလိပျစကားပုံတဈခုရှိတယျ။ “ငါ့နှလုံးသားရဲ့တခါးဝမှာ ဝငျခှငျ့မရှိလို့ စာတမျးခြိတျထားခဲ့တယျ။ အခဈြက ရောကျလာပီး ကွငွောလိုကျတယျ။ ငါကတော့ နရောတကာဝငျတာပဲ”တဲ့။ အငျးခုလညျး ပွောပွခငျြတာက ကိုယျ့ထကျအသကျငယျတဲ့ကောငျလေးတှနေဲ့ ခဈြသူရညျးစားဖွဈနတေဲ့မမတှကေို ကွုံ့တှခေံ့စားရမယျ့ အရာ 8 ခုအကွောငျးကိုပွောပွခငျြတာပါ။ ကဲ..ဖတျကွညျ့လိုကျကွရအောငျ.. သူတို့ “မိခငျ”လို့ထငျမယျ ကိုယျ့ထကျအသကျငယျတဲ့ ကောငျလေးတှကေိုခဈြသူတျောတဲ့ မမတှဖွေဈဖွဈ အသကျအမြားကွီးကွီးတဲ့မမကွီးတှဖွေဈဖွဈ အမြားဆုံးကွုံတှရေ့တာ သူတို့ကောငျလေးတှကေ သူတို့ကို မိခငျလို ထငျပီဆိုးတတျတာပါပဲ။ ဒါကတဈခါတဈရံလညျးဖွဈနိုငျသလို ခနခနလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုအခါတှမှော သူ့ကိုကလေးလို လိုကျလုပျပေးနမေယျ့အစား သူ့ကိုသူ လူကွီးဆနျအောငျ သငျပေးနိုငျဖို့လိုလိမျ့မယျ။
သူတို့ EXတှဘေယျလောကျအရေးကွီးခဲ့တယျဆိုတာကိုပွောပွလိမျ့မယျ လှနျခဲ့တဲ့ ၄နှဈလောကျက ခဈြခဲ့ဖူးတဲ့ သူတို့မိနျးကလေးက ဘယျလို ဘယျလောကျခဈြတယျဆိုတာကို မမတှကေို သူ့ကောငျလေးတှကေ ပွောပွပါလိမျ့မယျ.မကွားခငျြလို့နားပိတျထားရငျလညျး မမတှေ EXအကွောငျးကိုမေးပွီး ရဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မမတှကေတော့ သူတို့ EX ကွီးတှကေိုတောငျ မမှတျမိခငျြတော့ဘူး။ တခုသတိပေးခငျြတာက သငျ့ကောငျလေးက EXတှအေကွောငျးခနခန ပွောနရေငျ ခုခြိနျထိ ရညျးစားဟောငျးကို မမနေို့ငျသေးလို့ မမတှခေံစားရနိုငျတယျ။ အပွငျထှကျသှားရငျ မိနျးမငယျလေးတှလေို ဖလနျးနလေိမျ့လို့ထငျတယျ ကိုယျ့ထကျအသကျငယျတဲ့BOYကိုခဈြသူတျောထားရငျ ဒီကိစ်စကလညျး ရဈစရာကိစ်စပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ သငျအပွငျထှကျသှားတာနဲ့ သူနဲ့ရှယျတူကောငျမလေးတှလေို ဖလနျးဖလနျးထနတေယျမလား ပြျောနတေယျမလား ဘာညာ ရဈနိုငျပါတယျ။ မမနဲ့သူငယျခငျြးတှေ ကနကွေတယျ ကောငျလေးတှကေို ကွူနကွေတယျဆိုပွီးလညျး ဆကျရဈနိုငျပါတယျ။ တကယျက သငျကSelfiesလေး၁၀ပုံလောကျဆှဲပွီး အငွိမျပွနျလာတာတောငျ သူကယုံခငျြမှယုံပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ အဲ့ဒီလို ကောငျလေးတှနေဲ့တှရေ့ငျ “မငျးတှဖေူ့းတဲ့ မိနျးကလေးငယျငယျလေးတှနေဲ့ ငါ့ကို မနှိုငျးယှဉျပါနဲ့လို့”ပွောပွီး စကားဝိုငျးသာအဆုံးသတျလိုကျပါ။
မမတှေ အလေးအနကျထားခဈြတတျတာ သူတို့မသိကွဘူး ငယျရှယျတဲ့ကောငျလေးတှကေ ငွိမျငွိမျသကျသကျနဲ့ခဈြတတျတဲ့ မမတှကေို နားမလညျတတျကွဘူး။ သူတို့ကသူတို့ကို အရူးအမူးခဈြပွတဲ့ပုံစံ အရှယျနဲ့မလိုကျအောငျ အခဈြမှာ စိတျအားထကျသနျနတေဲ့ပုံစံမြိုးတှသေိပျသဘောကတြယျ။ ဒါပမေယျ့ မမတှအလေးအနကျထားပွီး အတတျနိုငျဆုံး တိတျဆိတျစှာခဈြတတျကွလို့ သူတို့ကအားမလိုအားမရဖွဈနတေတျတယျ။ သူတို့ပြျောရှငျမှုနဲ့မမတှအေတှကျ ပြျောရှငျမှုကမတူကွဘူး အသကျငယျငယျကောငျလေးတှရေဲ့ ပြျောစရာက ဘားတှေ ကလပျတှေ လူငယျတှေ သီခငျြးတှနေဲ့ ပွညျ့နတေဲ့နရောမြိုးဖွဈနတေတျတယျ။ မမတှကေ ဒါတှကေိုဖွတျကြျောခဲ့ပွီလို့အသကျကွီးခငျြယောငျဆောငျနတေဲ့ ကလေးတှထေကျ ပိုရငျ့ကကျြတဲ့လူကွီးလူကောငျးတှနေဲ့ စကားတှပွေောရငျး သီခငျြးတှေ နားထောငျခငျြတတျတယျ။ အဲ့ဒီလိုပြျောစရာနရော ပြျောစရာခံစားမှုမတူတတျတာမြိုးတှဖွေဈနတေတျတယျ။ ကဲ..ဘယျတဈခုကပိုကောငျးမယျလို့ထငျကွလဲ? သူတို့ကို ကွိုးကိုငျဖို့ ကွိုးစားနတေယျလို့ထငျကွတယျ
ငယျရှယျတဲ့ လူငယျတှဖွေဈတဲ့အတှကျ သူတို့ဘဝအတှကျမပွညျ့စုံတာတှေ သူတို့ဘာလိုခငျြနတောလဲဆိုတာကို တှေးဖို့ သူတို့ကို ပွောမြားပွောမိရငျ သူတို့ကို သနေတျနဲ့ပဈခံရသလို “ဒိနျး”ခနဲဖွဈသှားလိမျ့မယျ။ ဒီကိစ်စက ကိုယျ့ထကျအသကျငယျတဲ့ ကောငျလေးတှကေို ခဈြမိရငျ ကွုံကိုကွုံတှရေ့နိုငျတယျ။ သူတို့ကို မမတှကေ စိတျအနှောငျ့ယှကျဖွဈအောငျလုပျတာမဟုတျပမေယျ့ သူတို့အနာဂါတျအတှကျ Planခဖြို့နဲ့ သူတို့ကို ရငျ့ကကျြတဲ့လူတဈယောကျလို ပွုမူစခေငျြတာတော့ သူတို့မတှေးမိကွသေးဘူး။ အလြော့ပေးလိုကျလြောခွငျးနဲ့ရှုံးနိမျ့ခွငျးတူတယျထငျတယျ ကောငျလေးတျောတျောမြားမြားဖွဈတတျကွတာ သူတို့အလြော့ပေးလိုကျလြောလိုကျတာ သူတို့ရှုံးနိမျ့တယျ လို့ထငျတတျကွတယျ။ RSတဈခုမှ အလြော့ပေးခွငျး နားလညျမှု ကတိကဝတျဆိုတာ ခိုငျမာတဲ့နှောငျကွိုးကိုဖွဈစတေယျဆိုတာ သူတို့နားမလညျကွဘူး။ နောကျတဈခုခု သူတို့မှားနလေို့ ဝနျခံတာက ရှုံးနိမျ့မှုကို ဝနျခံတာ မဟုတျဘူးဆိုတာလညျး နားမလညျခငျြယောငျဆောငျနကွေတယျ။ ဒါကွောငျ့ ငယျရှယျတဲ့ ကောငျလေးတှကေိုခဈြမယျဆိုရငျ အမြားကွီးနားလညျ သညျးခံခှငျ့လှတျနိုငျမှုရှိဖို့လိုအပျပါမယျ။ လူကွီးဆနျတဲ့ ကောငျလေးနဲ့တှတေဲ့ မမတှကေတော့ ကံကောငျးမှာပေါ့..ကံကောငျးကွပါစမေမတို့..
အချစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုစံနှုန်းတွေထားပီး ဘယ်လိုကျမှပဲ ချစ်မယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်သတ်မှတ် အချစ်က သူသွားချင်တဲ့နေရာသွားတတ်တာပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်။ “ငါ့နှလုံးသားရဲ့တခါးဝမှာ ဝင်ခွင့်မရှိလို့ စာတမ်းချိတ်ထားခဲ့တယ်။ အချစ်က ရောက်လာပီး ကြေငြာလိုက်တယ်။ ငါကတော့ နေရာတကာဝင်တာပဲ”တဲ့။ အင်းခုလည်း ပြောပြချင်တာက ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်တဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့ ချစ်သူရည်းစားဖြစ်နေတဲ့မမတွေကို ကြုံ့တွေ့ခံစားရမယ့် အရာ 8 ခုအကြောင်းကိုပြောပြချင်တာပါ။ ကဲ..ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်.. သူတို့ “မိခင်”လို့ထင်မယ် ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်တဲ့ ကောင်လေးတွေကိုချစ်သူတော်တဲ့ မမတွေဖြစ်ဖြစ် အသက်အများကြီးကြီးတဲ့မမကြီးတွေဖြစ်ဖြစ် အများဆုံးကြုံတွေ့ရတာ သူတို့ကောင်လေးတွေက သူတို့ကို မိခင်လို ထင်ပီဆိုးတတ်တာပါပဲ။ ဒါကတစ်ခါတစ်ရံလည်းဖြစ်နိုင်သလို ခနခနလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခါတွေမှာ သူ့ကိုကလေးလို လိုက်လုပ်ပေးနေမယ့်အစား သူ့ကိုသူ လူကြီးဆန်အောင် သင်ပေးနိုင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
သူတို့ EXတွေဘယ်လောက်အရေးကြီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောပြလိမ့်မယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်လောက်က ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူတို့မိန်းကလေးက ဘယ်လို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကို မမတွေကို သူ့ကောင်လေးတွေက ပြောပြပါလိမ့်မယ်.မကြားချင်လို့နားပိတ်ထားရင်လည်း မမတွေ EXအကြောင်းကိုမေးပြီး ရစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မမတွေကတော့ သူတို့ EX ကြီးတွေကိုတောင် မမှတ်မိချင်တော့ဘူး။ တခုသတိပေးချင်တာက သင့်ကောင်လေးက EXတွေအကြောင်းခနခန ပြောနေရင် ခုချိန်ထိ ရည်းစားဟောင်းကို မမေ့နိုင်သေးလို့ မမတွေခံစားရနိုင်တယ်။ အပြင်ထွက်သွားရင် မိန်းမငယ်လေးတွေလို ဖလန်းနေလိမ့်လို့ထင်တယ် ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်တဲ့BOYကိုချစ်သူတော်ထားရင် ဒီကိစ္စကလည်း ရစ်စရာကိစ္စပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်အပြင်ထွက်သွားတာနဲ့ သူနဲ့ရွယ်တူကောင်မလေးတွေလို ဖလန်းဖလန်းထနေတယ်မလား ပျော်နေတယ်မလား ဘာညာ ရစ်နိုင်ပါတယ်။ မမနဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ကနေကြတယ် ကောင်လေးတွေကို ကြူနေကြတယ်ဆိုပြီးလည်း ဆက်ရစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်က သင်ကSelfiesလေး၁၀ပုံလောက်ဆွဲပြီး အငြိမ်ပြန်လာတာတောင် သူကယုံချင်မှယုံပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီလို ကောင်လေးတွေနဲ့တွေ့ရင် “မင်းတွေ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့ ငါ့ကို မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့လို့”ပြောပြီး စကားဝိုင်းသာအဆုံးသတ်လိုက်ပါ။
မမတွေ အလေးအနက်ထားချစ်တတ်တာ သူတို့မသိကြဘူး ငယ်ရွယ်တဲ့ကောင်လေးတွေက ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့ချစ်တတ်တဲ့ မမတွေကို နားမလည်တတ်ကြဘူး။ သူတို့ကသူတို့ကို အရူးအမူးချစ်ပြတဲ့ပုံစံ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် အချစ်မှာ စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသိပ်သဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့် မမတွအလေးအနက်ထားပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး တိတ်ဆိတ်စွာချစ်တတ်ကြလို့ သူတို့ကအားမလိုအားမရဖြစ်နေတတ်တယ်။ သူတို့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့မမတွေအတွက် ပျော်ရွှင်မှုကမတူကြဘူး အသက်ငယ်ငယ်ကောင်လေးတွေရဲ့ ပျော်စရာက ဘားတွေ ကလပ်တွေ လူငယ်တွေ သီချင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။ မမတွေက ဒါတွေကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီလို့အသက်ကြီးချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ ကလေးတွေထက် ပိုရင့်ကျက်တဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့ စကားတွေပြောရင်း သီချင်းတွေ နားထောင်ချင်တတ်တယ်။ အဲ့ဒီလိုပျော်စရာနေရာ ပျော်စရာခံစားမှုမတူတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ ကဲ..ဘယ်တစ်ခုကပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ကြလဲ? သူတို့ကို ကြိုးကိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ထင်ကြတယ်
ငယ်ရွယ်တဲ့ လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ဘဝအတွက်မပြည့်စုံတာတွေ သူတို့ဘာလိုချင်နေတာလဲဆိုတာကို တွေးဖို့ သူတို့ကို ပြောများပြောမိရင် သူတို့ကို သေနတ်နဲ့ပစ်ခံရသလို “ဒိန်း”ခနဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒီကိစ္စက ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်တဲ့ ကောင်လေးတွေကို ချစ်မိရင် ကြုံကိုကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်။ သူတို့ကို မမတွေက စိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပေမယ့် သူတို့အနာဂါတ်အတွက် Planချဖို့နဲ့ သူတို့ကို ရင့်ကျက်တဲ့လူတစ်ယောက်လို ပြုမူစေချင်တာတော့ သူတို့မတွေးမိကြသေးဘူး။ အလျော့ပေးလိုက်လျောခြင်းနဲ့ရှုံးနိမ့်ခြင်းတူတယ်ထင်တယ် ကောင်လေးတော်တော်များများဖြစ်တတ်ကြတာ သူတို့အလျော့ပေးလိုက်လျောလိုက်တာ သူတို့ရှုံးနိမ့်တယ် လို့ထင်တတ်ကြတယ်။ RSတစ်ခုမှ အလျော့ပေးခြင်း နားလည်မှု ကတိကဝတ်ဆိုတာ ခိုင်မာတဲ့နှောင်ကြိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ သူတို့နားမလည်ကြဘူး။ နောက်တစ်ခုခု သူတို့မှားနေလို့ ဝန်ခံတာက ရှုံးနိမ့်မှုကို ဝန်ခံတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း နားမလည်ချင်ယောင်ဆောင်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့် ငယ်ရွယ်တဲ့ ကောင်လေးတွေကိုချစ်မယ်ဆိုရင် အများကြီးနားလည် သည်းခံခွင့်လွတ်နိုင်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ လူကြီးဆန်တဲ့ ကောင်လေးနဲ့တွေ့တဲ့ မမတွေကတော့ ကံကောင်းမှာပေါ့..ကံကောင်းကြပါစေမမတို့..
ငွေကြေး အခက်အခဲဖြစ်သူများ အတွက် ဂမ္ဘီရနည်းဖြင့် ငွေယပ်တော် ဖြင့် ငွေဓါတ်ခေါ်ခြင်း ..
ထူးထူး ခြားခြား ပေါ်ပေါက် လာတဲ့ ကျောက်ပန်းချီကား နဲ့ “စေတီဘုရား”